चर्को नुन खानुहुन्छ ? होस् गर्नुहोला ! खबरमञ्च
चर्को नुन खानुहुन्छ ? होस् गर्नुहोला !
१८ साउन, खबरमञ्च, at 3:50 PM
By खबर मञ्च / August 3, 2019 / Comments Off on चर्को नुन खानुहुन्छ ? होस् गर्नुहोला !
काठमाडौं । तपाईं दिनमा कति नुन खानुहुन्छ ? होस् गर्नुहोला, तपाईंलाई त्यस्ले ठूलो नोकसानी पुर्याउन सक्छ । हामी नेपालीहरू स्वादे जिभ्रो हुने नाममा उपरीमाथि थुपरी नुन खान्छौं । नुनमा पाइने सोडियमले रक्तचाप बढाउँछ जसले मुटुरोग र हृदयघात निम्त्याउँछ ।
Last Modified: August 3, 2019 @ 3:56 pm